Battleship (2012) | MM Movie Store
နာမညျကြျော အဆိုတျော Rihanna ပါဝငျထားပွီး John Carter ကားနဲ့ မွနျမာ ပရိတျသတျတှေ အသိမြား ခဲ့တဲ့ မငျးသား Taylor Kitsch က ဗိုလျလေး အဲလကျဈ ဟျောပါ အဖွဈပါဝငျ သရုပျဆောငျထားပါတယျ။ ဟျောပါ ကတော့ တကယျတော့ ပေါကျကရ နထေိုငျတကျတဲ့ သူတဈယောကျပါ …
တဈနတေ့ော့ သူလညျး ရတေပျဗိုလျ ရဲ့ သမီးကိုကွိုကျ မိရာကနေ သူ့အဈကို ဖွဈသူရဲ့ ဆှဲဆောငျ မှု့ကွောငျ့ ရတေပျထဲ ဝငျခဲ့ပွီးဗိုလျလေး ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။ဒီလိုနဲ့ပဲ သူလညျး နှဈစဉျ ကငျြးပနကြေ နိုငျငံ ပေါငျးစုံရတေပျ လကေ့ငျြ့ရေးမှာ ပါဝငျခဲ့ရပါတယျ။
လကေ့ငျြ့နရေငျးကနေ မမြှျောလငျ့တဲ့ယာဉျပြံကွီးတှရေောကျလာ ခဲ့ပါတယျ။အဲ့ယာဉျပြံတှဟော လကေ့ငျြ့ရေးရဲ့ အစိတျအပိုငျးတဈခု မဟုတျသလို သူတို့ထငျနသေလို မွောကျကိုးရီးယားဘကျက မဟုတျပါဘူးထူးဆနျးတာက သူတို့ ယာဉျတှေ နားမှာ ရဒေါတှေ အလုပျ မလုပျပါဘူး
အဲ့ယာဉျတှကွေောငျ့ပဲအဈကို ဖွဈသူကိုလညျး ဆုံးရှုံးခဲ့ရ ကပ်ပတိနျကိုလညျး ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ ဟျောပါတဈယောကျ သင်ျဘောတဈစီး လုံးကို အုပျခြုပျပွီး ဘယျကမှနျး မသိတဲ့ ယာဉျတှကေို ဘယျလို အနိုငျယူမလဲ ….?
အဲ့ယာဉျတှကေကော ဘယျသူ့လကျခကျြလဲ ဘယျကလဲ ဘယျလိုကွောငျ့ ရောကျလာတာလဲ…အစရှိတာတှအေတှကျတော့ ဇာတျကားကို သာ ရှု့စားနိုငျပါကွောငျး တငျဆကျပေးလိုကျရပါတယျ။
နာမည်ကျော် အဆိုတော် Rihanna ပါဝင်ထားပြီး John Carter ကားနဲ့ မြန်မာ ပရိတ်သတ်တွေ အသိများ ခဲ့တဲ့ မင်းသား Taylor Kitsch က ဗိုလ်လေး အဲလက်စ် ဟော်ပါ အဖြစ်ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ဟော်ပါ ကတော့ တကယ်တော့ ပေါက်ကရ နေထိုင်တက်တဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ …
တစ်နေ့တော့ သူလည်း ရေတပ်ဗိုလ် ရဲ့ သမီးကိုကြိုက် မိရာကနေ သူ့အစ်ကို ဖြစ်သူရဲ့ ဆွဲဆောင် မှု့ကြောင့် ရေတပ်ထဲ ဝင်ခဲ့ပြီးဗိုလ်လေး ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲ သူလည်း နှစ်စဉ် ကျင်းပနေကျ နိုင်ငံ ပေါင်းစုံရေတပ် လေ့ကျင့်ရေးမှာ ပါဝင်ခဲ့ရပါတယ်။
လေ့ကျင့်နေရင်းကနေ မမျှော်လင့်တဲ့ယာဉ်ပျံကြီးတွေရောက်လာ ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ယာဉ်ပျံတွေဟာ လေ့ကျင့်ရေးရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု မဟုတ်သလို သူတို့ထင်နေသလို မြောက်ကိုးရီးယားဘက်က မဟုတ်ပါဘူးထူးဆန်းတာက သူတို့ ယာဉ်တွေ နားမှာ ရေဒါတွေ အလုပ် မလုပ်ပါဘူး
အဲ့ယာဉ်တွေကြောင့်ပဲအစ်ကို ဖြစ်သူကိုလည်း ဆုံးရှုံးခဲ့ရ ကပ္ပတိန်ကိုလည်း ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ ဟော်ပါတစ်ယောက် သင်္ဘောတစ်စီး လုံးကို အုပ်ချုပ်ပြီး ဘယ်ကမှန်း မသိတဲ့ ယာဉ်တွေကို ဘယ်လို အနိုင်ယူမလဲ ….?
အဲ့ယာဉ်တွေကကော ဘယ်သူ့လက်ချက်လဲ ဘယ်ကလဲ ဘယ်လိုကြောင့် ရောက်လာတာလဲ…အစရှိတာတွေအတွက်တော့ ဇာတ်ကားကို သာ ရှု့စားနိုင်ပါကြောင်း တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။